HomeTORKIAFaritra Marmara54 SakaryaNahazo tsolotra ve ny Sapanca Cable Car Tender?
04 / 10 / 2019 Levent Elmastaş 54 Sakarya, ANKAPOBENY, Gondola, Faritra Marmara, TORKIA, TELPHER 0
nanamboatra ny rusvet tao anaty tendron'ny fiasan'ny tariby Sapanca
Bursa Teleferik A.Ş. Ny tale jeneralin'ny Burhan Ozgumus, ny kolikoly TL 1 tapitrisa ho an'ny ben'ny tanàna mba hahazoana ny tsaho malefaka dia manambara fa tsy marina izany, hoy izy.
Ozgumul, ny andro nialoha ny filohan'ny faritany CHP Sakarya mifandraika amin'ireo fiampangana mipetraka, "Iza no milaza izany, (Avia, aza matahotra aho fa tsy matahotra an'Andriamanitra ianao) hoy aho" hoy izy.
Taorian'ny hatsaram-panahy dia nilaza i Burhan Özgümüş fa nanome vola ho an'ny toerana roa izy ireo ary nilaza hoe: "Nividy ny iray amin'ny hoso-doko ao amin'ny Sekolin'ny Kilonga Hasanpaşa 2 arivo aho. Hoy ihany koa izy ireo, "Ratsy loatra ny toe-bolan'i Sapancaspor, 5 arivo kilao nomen'izy ireo ho takalako. Bağış Ankoatr'izay dia tsy misy vola manokana ..
HAFA IZAHAY 820BIN LIRA
Manambara izy ireo fa manafika ny tetikasa Ozgumus izy ireo, "Municipality (nataoko ny fandefasana ny toerana. Manana olana amiko ve ianao? Tsia, maninona raha manomboka eto" hoy ny fitenenana). Misy ihany koa ny fifanarahana toy izany ka miato aho isan'andro mandoa onitra 820 arivo pounds. ”(Nurettin Eryilmaz / Ny Sakarya)
Niverina tany Normandy ve ny Metro Flights? 02 / 04 / 2018 Ankara Metro in nandritra ny andro ranomasina fitsarana dia nanao fanambarana momba ny loza izay nitranga tao amin'ny fifandonan'ny planeta roa fiarandalamby no ben'ny tanàna Mustafa ny lamàtra, hoy ny fanambarana ao amin'ny Twitter hoe Sabotsy fa hisokatra ho an'ny mpiasa izay tsy miraharaha ny loza metro traikefa vao maraina ora. Ankara Metropolitan ben'ny tanàna Mustafa ny lamàtra, Kızılay-Batıkent Tamin'ny maraina ny fotoana ao amin'ny metro-dalana indray dia mbola ao amin'ny ara-dalàna Mazava ho azy fa nitatitra Danube, mizara ny kaonty Twitter taorian'ny loza nitranga Sabotsy in Kızılay-Batıkent ambanin'ny tany tsipika nambara ny fahavitan'ny asa fanarenana. Nilaza koa i Thun fa tsy nisy olana teo amin'ny fitsapana fitsarana; Asabotsy maraina momba ny lozam-pifamoivoizana amin'ny seranana manodidina ny 5.30 ...
Ny Sapanca Geyve YHT Line Clips 'Fesat' Claim In Parliament 16 / 11 / 2017 Ny lehiben'ny CHP Konya, Hüsnü Bozkurt, dia nitondra ny fangatahan'ny Anca Sapanca Geyve High Speed ​​Train Line sy ny fandaharam-potoan'ny Fihaonambe tamin'ny volana aogositra. Bozkurt, izay nanontany ny Praiminisitra Binali Yıldırım momba ireo fiampangàna izay naneho ny hevitr'izy ireo momba ny fampisehoana, dia nanambara fa araka ny vaovao, ireo orinasa izay nangatahana ny fandraisana anjara dia tsy nifampiraharaha tamin'ny fepetra noraisina, nifangaro ny fifanarahana, tsy nahitam-pahamendrehana ny fepetra noraisina ary tsy nasaina ny fepetra fanabeazana. naneho, dia toy izany ny halehiben 'ny Repoblikan'i Torkia State lalamby 1 998 arivo tapitrisa lavitrisa 999 223 dia nilaza fa tany am-boalohany vidin'ny TL Construction ho. "Sapanca-Geyve High Speed ​​...
Nametra-pialana ny minisitry ny làlan'i India noho ny kolikoly nahazo kolikoly 11 / 05 / 2013 Nametra-pialana ny Minisitry ny Fitaterana an'i India noho ny kolikoly manala baraka ny minisitry ny Railway Indiana Kumar Bansal taorian'ny namoahan'ny havany ho kolikoly. Nilaza tamin'ny mpanao gazety i Bansal taorian'ny nandefasana ny fahitalavitra tao amin'ny fahitalavi-panjakana fa nanolotra ny fametraham-pialany ny praiminisitra Manmohan Singh. Niteny ireo mpitarika ny mpanohitra fa nampanan-karena ny havanan'i Bansal tamin'ny fampiasana ny fifandraisany tamin'ny minisitra. Ireo mpikaroka federaly, Vijay Singla, zanaky Bansal, arivo dolara amerikana mba handoavana ny fitantanana an-dalamby ho lazaina fa asa, anisan'izany ny mpiandraikitra ny mpiasa Mahesh Kumar 166 dia nosamborina. Ny fahitalavi-panjakana koa dia namporisika ny Antoko Kongresy hanavao ny tatitra momba ny fanadihadiana momba ny fifanarahana amin'ny fivarotana kömür
Kolikoly tsy vola trosa 13 / 01 / 2014 Manangam-bola, fa tsy kolikoly: Izmir 'İmbat kolikoly sy famadihana ireo olona ahiahiana nosamborina noho ny fampifangaroan-dratsy tamin'ny fanambaràna ny fifamoivoizana teo amin'ny samy hafa, fa tsy kolikoly, no nilaza fa vola trosa. Ny sasany tamin'ireo olona 14 nosamborina nandritra ny hetsika kolikoly tamin'ny hetsika TCDD Port ao Izmir tamin'ny anaran'i mb Imbat Wave çıktı dia niseho tao amin'ny fitsarana. MCB, mpandraharaha iray izay nilaza fa resaka politika izany, dia nilaza fa ny orinasany dia nametraka fepetra hanoherana ireo fanambarana tao amin'ny fanambarany ary nilaza hoe: "Nahazo tolotra 4 avy amin'ny TCDD aho tamin'ny daty samihafa. Isaky ny nanenjika ahy aho, dia notapahako ny famonoana ho faty. Ny minisitry ny fitaterana Binali Yıldırım taloha no vavolombelon'ny fanambadiana. Noho ny fampiharana azy any amin'ny tanànan'i Metropolitanan'i Izmir, 17 ...
Bribery amin'ny raharaha İZBAN (Video) 04 / 02 / 2013 Ny kolikoly IZBAN mikasika ny tranga nahazo ny mpitarika ny Ben'ny tanànan'i Aziz Kocaoglu tamin'ny fahaiza-manaon'ilay fitsarana, ny mpanohitra 130 dia niomana ho an'ny raharaha Metropolitan Casey, misy tsipiriany lehibe momba ny tatitra momba ny matihanina. Ny sarimihetsika IZBAN sy ny fandefasana ity horonantsary ity tao amin'ny efitranon'ny sinema 32, ireo manam-pahaizana notendrena handinika ny antontan-taratasim-peo, ny orinasa mpamokatra horonantsarimihetsika dia nitaky ireo tompon'antoka mpiantafika 125 arivo kilao ary tsy afaka nahazo valiny mahafa-po ho an'ilay tatitra. Muzaffer Uzlaş, mpisolovavan'ny mpiaro ny orinasa Sportsnet, dia nahazo fahatokiana voalohany tamin'ny fifandraisany tamin'ny mailaka ary naneho ny toe-tsaina tso-po.
Niverina tany Normandy ve ny Metro Flights?
Ny Sapanca Geyve YHT Line Clips 'Fesat' Claim In Parliament
Nametra-pialana ny minisitry ny làlan'i India noho ny kolikoly nahazo kolikoly
Kolikoly tsy vola trosa
Bribery amin'ny raharaha İZBAN (Video)
Ny faharesen-dahatra dia amin'ny alàlan'ny fifanarahana fiara fitaterana Alanya!
Ny STM dia andrasana hanasana ny fifanarahana amin'ny fanavaozana ny fifanarahana fiara fitaterana fiara an-tariby Izmir Balçova
Ny dingana faharoa amin'ny tolotra fiara fitaterana dia vita
Misy ny fisalasalana ao amin'ny tetikasan'ny tetikasam-barotra Alanya Castle Craft ...